မျောက်ငိုသီး ~ စန္ဒကူး
မျောက်ငိုသီး ကိုကြားဖူးပေမယ့် ရန်ကုန်မှာနေတုန်းကမစားဖူးခဲ့ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က အင်ဒို ရောက်တော့ တစ်ခါစားဖူးတယ်၊ဒညင်းသီးနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်မို့ ကြိုက်တာအရမ်းဘဲ.. မေးပြီးလိုက်ဝယ်ဖို့ အချိန်မရှိတာရယ်.. ဘာအသီးမှန်းမသိတာရယ်မ၀ယ်ခဲ့ရဘူး။ မနှစ်က တော့ ထိုင်းမှာ ဈေးသွားတော့ အင်ဒိုသူငယ်ချင်း က အဲဒီအသီးကို သူတို့အခေါ် (ပါ့တယ့်) ကို ဈေးက၀ယ်လာပြီး ညီမလေး အိမ်မှာ ကြော်ကျွေးတယ်..
အဲဒီအခါမှ ညီမလေးက မြန်မာပြည်မှာလဲရှိတယ်..မျောက်ငိုသီးလို့ခေါ်တယ် လို့ ပြောပြတယ်။ ပြန်သွားတော့ အဲဒီအသီးလေးတွေသူသယ်လာသေးတယ်။ စင်ကာပူက ထိုင်းတွေ ရောင်းတဲ့ ဈေးမှာလဲ အထုပ်လေးတွေနဲ့ထုပ်ပြီးရောင်းတာတွေ့တယ်.. ၂ ထုပ်လောက်ဆွဲလာခဲ့သေးတယ်။ ဒီနှစ်တော့ သူငယ်ချင်းကို နင်အိမ်ပြန်ရင်ယူလာခဲ့ဆိုပြီးမှာလိုက်တော့သူကပဲတောင်ရှည်အစေ့လေးတွေကို ဖြတ်ဖြတ်ပြီး သယ်လာတယ်.. အမျိုးစုံလုပ်စားတာဘဲ။ ကျွန်မကတော့ စားသုံးသူအဆင့်ပေါ့..
ကြက်သွန်ဖြူကို အချောင်းလေးတွေလှီးပီး အရင်ကြော်၊ အစေ့လေးတွေထည့်... ကြက်သွန်ဖြူအနံ့လေးတွေ စိမ့်ဝင်သွားမှ ကြော်ပြီးသားငါးရံ့ခြောက်ကြော်လေးတွေထည့်မွှေလိုက်ရင် ဒညင်းသီးကြော်အနံ့လေးနဲ့ မျောက်ငိုသီးကြော်လေးရပါပြီ။ ဘလချောင်ကြော်နဲ့လဲ ရပါတယ်။ ငါးခြောက်က ဆားပါပြီးသားမို့ ဘာမှထပ်မထည့်တော့ပါဘူး။
ချစ်သူအနားရှိသူများနဲ့.. အနံ့မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့သိပ်မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒညင်းသီးလောက်တော့ အနံ့မပြင်းပေမယ့် သူ့မှာလဲအနံ့လေးတော့ခပ်ရှရှရှိပါတယ်။
google က website တစ်ခုမှာ ကသည်းလူမျိုးတွေအရမ်းကြိုက်တဲ့ မျောက်ငိုသီးလို့ရေးထားတာတစ်ခါဖတ်ဖူးတယ်။ ဒီလင့် လေးမှာတော့ မျောက်ငိုသီးအကြောင်းအောက်ပါအတိုင်းရေးထားတယ်။ အသီးတွေလဲအတွဲလိုက် ပုံမှာပြထားသေးတယ်။ အားရစရာ။း)
မျောက်ငိုသီး နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ရောင်းချရန် ဈေးကွက်ဝင်လျက်ရှိ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ နယ်တွင် စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသော မျောက်ထန်းလျက် ခေါ် မျောက်ငိုသီးမှာ
နိုင်ငံခြားပို့ကုန်အဖြစ် ဈေးကွက်ဝင်ကြောင်း ဒေသခံများထံမှသိရသည်။
“ဒီအသီးက တမူးမြို့ မှာဆိုရင် ဖောက်သည်ဈေး တစ်တောင့်ကို တစ်ရာရှိတယ်ဗျ ဒီပြင်ဦးလွင်မှာကတော့ တစ်ပင်လုံးကိုဈေးဖြတ်ပြီး ၀ယ်တာဗျ ၊ တစ်ပင်ကို အနည်းဆုံးလေးသောင်းတော့ရတယ်” ဟု မျောက်ငိုသီးစိုက်ပျိုးသူ ဦးဆော်မာမှ
မျောက်ငိုသီး သီးချိန်မှာ ဆယ်လပိုင်း မှ နှစ်လပိုင်းထိဖြစ်ပြီး ကလေးမြို့ နှင့် တမူးမြို့  များတွင် သီးချိန်နောက်ကျကြောင်းအပင် စစိုက်ထားလျှင် ၆ နှစ် ၇ နှစ်စောင့်ရပြီး အနည်းဆုံး အနှစ် ၅၀ ခန့် အသီးသီးကြောင်း ဦးဆော်မာထံမှသိရသည်။
Posted by Sandakuu at 4:40 AM
မျောက်ငိုပင်ဆုိုရင်တော့သိပြီ။ မြင်ဘူးတယ်။ ပင်စည်ကချောလွန်းလို့ မျောက်တောင်ငိုရတယ်ဆုိုတာဘဲ။ ဒါပေမဲ့ဒီအပင်ကတော့ပင်စည်ချောမချောမမြင်ရဘူး..း)
ဟုတ်ပါ့နော်.. ကူးလဲ ဒညင်းသီးအလွမ်းပြေ ကစ်နေတာ..း))
ခြံမှာ မျောက်ငိုသီးပင် စိုက်ခိုင်းမှနဲ့တူတယ်။ တစ်တောင့်တစ်ရာဆိုတော့ မဆိုးဘူးနော်။
ဒီမှာလည်းအင်ဒိုကသူငယ်ချင်းတွေစားလေ့ရှိတယ်။ ဒညင်းသီးနဲ့ တူလို့ 
စားကြည့်သေးတယ်။ မျောက်ငိုသီးလို့ ခေါ်မှန်းအခုမှသိတယ်။ ကျေးဇူးနော်.
အနံ့ပြင်းပြင်း မခံနိုင်သူကြီး said...
အဲဒီ အသီး အနံ့မခံနိုင်လို့ စားချင်ပါဖူး အီး ဟီး ဟီး :(
စလုံးက ဟော်ကာစင်တာတွေမှာ စားဖူးတယ်..တညင်းသီးနဲ့ဆင်တယ်
မျောက်ငိုသီးကြိုက်တယ် မစားရတာ ကြာပေါ့
တညင်းသီးလည်းမကြိုက်လို့ အဲကောင်လည်းမစားဖြစ်ဘူး .. တညင်းသိးနဲ့ တော်တော်တူတာတော့သိတယ် စလုံးမှာ ရတယ် အမြဲလိုလိုတွေ့ တယ်ဆိုင်တွေမှာ
ကူးကူး..အဲ့ဒါ စိန်ပန်းပင် နဲ့ စိန်ပန်းသီး မဟုတ်ဘူးလား...ကြည့်ရတာတူနေလို့...
ဟုတ်ဘူးလေ.. စိန်ပန်းသီးက အပြားကြီးတယ်...
မျောက်ငိုသီးအနုဆိုရင် အစေ့ထုတ်စရာမလိုပဲ အသီးရဲ့ အခွံလေးကို အစိမ်းလေးတွေအကုန် ကွာရုံခြစ်ပြီး ပါးပါးလှီး၊ ရေနွေးလေးနဲ့ ဖျောပြီး သုတ်စားရင်လဲအရမ်းစားကောင်းပါတယ်။ အစိမ်းတော့ကုန်ရပါတယ်။ မဟုတ်ရင်ခါးတတ်လို့ ပါ၊ India မှာနေတုန်းက စားဖူးတဲ့ ချင်းလူမျိုးတွေ မဏိပူရကသည်းတွေလုပ်တဲ့နည်းပါ။
ဟုတ်တယ်.. အခွံလေးတွေခြစ်ပီးတော့ ပြုပ်စားတယ်..ကြော်စားတယ်...
သူငယ်ချင်းအမေက ချင်းတောင်ကဆိုတော့ သူ လုပ်ကျွေးတာစားဖူးတယ်။
မြောက်ငိုပင်က အပင်မချောဘူးရယ် . . အပင်ကြီးရဲ့ အကိုင်းသေးသေး အဖျားတွေမှာပဲ အသီးသီးလို့ မြောက်ခူးဖို့မလွယ်လို့ မြောက်ငိုပင်လို့ခေါ်ကြတယ်ပြောတာပဲ
What's up Dear, are you genuinely visiting this web page onaregular basis, if so then you will definitely obtain fastidious knowledge.
my web site; Http://forum.websound.ru/soundabc/index.php?title=Участник:dwaynemad
Hi, Neat post. There's an issue along with your website in internet explorer, might check this? IE nonetheless is the marketplace leader andahuge part of people will leave out your great writing due to this problem.